‘हुर्काउनै मुस्किल चार अमूल्य उपहार’ – Samacharpati
पाेखरा, ४ माघ । गौरव प्रधानलाई एक सन्तानको चाहान थियो । यसअघि नै पाँच वर्षको छोरा भएकाले सकेसम्म एक छोरी भइदिए छोराछोरी दुवैको रहर पूरा हुने चाहाना स्वाभाविक पनि हो । सधैँ सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र ! श्रीमतीको रजस्वला रोकिएको ३७ दिनमा नै थाहा भयो गर्भमा तीन सन्तान छन् भन्ने कुरा । विगत पाँच वर्षदेखि दुबइमा रहनुभएका प्रधानलाई सन्तानको माया त हुने नै भयो । वैदेशिक रोजगार रहर नभइ बाध्यता थियो । पुतलीबजार नगरपालिका–१ का प्रधानले बुबाआमाको साथ श्रीमतीलाई छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा फर्कनुभयो ।
प्रत्येक महिनाको भिडियो एक्स रे को रिपोर्टमार्फत श्रीमतीको बारेमा जानकारी लिइरहनुभएका प्रधान २० दिनअघि मात्र नेपाल आउनुभयो । प्रधानले पुस २७ गते आइतबार श्रीमतीलाई पोखराको मणिपाल अस्पतालमा लिएर आउनुभयो । ३४ हप्ता चार दिनमा शुक्रबार बिहान ९ बजे डा महेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वको टोलीले शल्यक्रिया गरेर २६ वर्षीय सुनिता प्रधानको गर्भबाट चार सन्तान निकाल्यो । जन्माएका सन्तानमा पहिलो छोरी १.६ किलो तौल, दोस्रो छोरा १.३ किलो तौल, तेस्रो छोरी १.३ किलो तौल र चौथो छोरी १.४ किलो तौलका रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारको सीमित आम्दानीबाट परिवारको पालनपोषण गर्दै आउनुभएका प्रधान दम्पत्तीलाई एकैचोटी जन्मिएका चार सन्तानको पालनपोषण थप समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै लागेको छ । तर, आशावादी छन् दम्पत्ती “यो भगवानको अमूल्य उपहार हो, हामी निकै खुशी छौं । तर, हुर्काउनै मुस्किल छ ।”
“कम तौलका कारण बच्चाको स्वास्थ्यमा केही समस्या आउने होकी भन्ने चिन्ता त छ, तर कामना गरेको छांै, पक्कै सबै राम्रो नै हुनेछ ।” जम्मा ५३ दिनको बिदामा आउनुभएका प्रधान बिदा थप्न नमिल्ने समस्याले पनि पिरोलिनुभएको छ । “भिसा रिन्यू गर्नुपर्छ । अहिले बिदा थप्न पनि मिलेन ।” उहाँले भन्नुभयो, “सन्तानको माया उस्तै छ । कम तौल भएकाले विशेष स्याहार गर्नुपछर्, तर आफू श्रीमतीसँगै हुनुपर्ने बेला विदेश जान बाध्य छु । नजाउ कसरी पाल्नु ? जाऊ मेरो जरुरत छ यतिबेला उनलाई ।”
अहिले बच्चालाई सघन कक्षमा राखिएको छ । अस्पतालको खर्चको बारेमा पनि प्रधानले केही नसोचेको बताउनुभयो । “कति दिनसम्म राख्नुपर्ने हो खै ? कति खर्च लाग्ने हो केही थाहा छैन । अहिलेसम्म अस्पताल र डाक्टरहरुबाट उपचार सहुलियतको बारेमा केही जानकारी गराउनु भएको छैन ।” चार सन्तानबारे डाक्टरको भनाइ भिडियो एक्सरेमा तीन वटा देखिएको तर गर्भमा चारवटा सन्तानको बारेमा डा महेन्द्रराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, “कतिपय अवस्थामा बच्चा खप्टेको हुन्छ, अंग नदेखिन सक्छ, देखिँदा तीन वटा मात्रै देखियो पछाडिपट्टी भएकाले नदेखिएको हुनसक्छ ।”
उहाँले आठ लाख मानिसमध्ये एक महिलाले चार सन्तान जन्माउने गरेकोे बताउनुभयो । कृत्रिम गर्भाधानमा जुम्ल्याह, तिम्ल्याहा, चम्ल्यामा जन्मने देखिए पनि प्राकृतिक गर्भाधानमा भने यो दुर्लभ भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “गर्भाधानमा सामान्यतया एक शुक्रकिटको मिलन एउटासँग भएर त्यसपछि हुने विभाजनले गर्दा पनि हुनसक्छ अथवा एउटाभन्दा बढी शुक्रकिटको धेरै वटा अण्डासँग मेल भएर पनि जन्मने गदर्छ ।”
उहाँले चम्ल्याहा शिशुको तौल कम हुने भएकाले विभिन्न समस्या देखिनसक्ने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कम तौलका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ, त्यसैगरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम हुने भएकाले सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । अहिले सामान्य देखिए पनि कति बेला समस्या आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन, शिशुलाई सीमित व्यक्तिको मात्रै निगरानीमा राख्नुपर्छ र धेरैले छुने गर्दा सङ्क्रमण हुनसक्छ ।” उहाँले अहिले बच्चालाई सघन कक्षमा सलाइन पानी दिएर राखिएको बताउनुभयो बच्चालाई स्तनपान गराउनसक्ने नभएसम्म बच्चालाई लान नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
रामपुरको पाँचौं अधिवेशनमा चयन भएका कार्यसमितिका पदाधिकारी
अञ्जली अधिकारीको अहिलेसम्मकै हट अवतारको भिडियो हेर्नुहोस्, जहाँ उनी गज्जबसँग खुलीन्